Silicon Boride Upfu, SiB6 - Goodao Technology Co, Ltd.
Molecular fomula B6si
CAS Nhamba 12008-29-6
Kuwandisa 3. 0g / cm3
Nzvimbo yakanyunguduka 2200 C
Zvishandiso Sezvo P-mhando yepamusoro-tembiricha thermoelectric zvinhu kutsiva boapcarbide, inogona kushandiswa sevarety yeyakajaira hasha, kukuya carbide. Yakabatanidzwa seinjiniya zvedongo zvekushandisa, blasting blacks, yekugadzira magasi uye mamwe akafuridzirwa sintered zvikamu uye zvisimbiso Zvinoshandiswa seinopikisa
Silicon yakasungwa = 92. 95, density 3.0 / cm3, melting point 2200, glossyblack grey poda, isingasviki mumvura, oxidation kuramba, thermalshock kuramba, chemakemikari ngura kuramba, kunyanya pasi pemhepo yekuvhunduka ine simba rakasimba uye kugadzikana Ine yakanakisathermoelectricity, inogona kushandiswa se-p-mhando kupisa kwakanyanyamoelectric zvinhu kutsiva boron carbide, uye kupisa kwayo kwekupedzisira kunogona kusvika 1200 C. Inogona kushandiswa seinjiniya ceramicmaterial, sandblasting kamwene, kugadzira gasi turbine mashizha uyezve zvakaumbwa sintered zvikamu uye zvisimbiso.
Aluminium borate (AlB2) rudzi rwemhando yezvinhu zvakagadzirwa nealuminium uye boron. Iyo yegrey yakatsvuka yakasimba pasi peyakajairika tembiricha uye kumanikidza. Iyo yakagadzikana muchitonho inoderedza acid, uye yakaora mune inopisa hydrochloric acid uye nitric acid. Icho chimwe chezvikamu zviviri zvealuminium uye boron. Imwe yacho alb12, iyo inowanzonzi aluminium borate. Alb12 idema inopenya monoclinic crystal ine huremu hwakadzama hwe2.55 (18 ℃).
Iyo insoluble mumvura, acid uye alkali. Inoora mune inopisa nitric acid uye inowanikwa nekunyunguduka boron trioxide, sarufa uye aluminium pamwechete.
Muchimiro, maB maatomu anoumba graphite maflakes ane maatomu eAl pakati pavo, ayo akafanana zvikuru nemamiriro emagnesium diboride. Iyo imwechete kristaro yeAlB2 inoratidza simbi conductivity padivi peiyo axis inoenderana ne hexagonal ndege yeiyo substrate. Boron aluminium composites inosimbiswa ne boron fiber kana boron fiber ine yekudzivirira inodzivirira
Izvo huwandu hwehuwandu hwe boron fiber ingangoita 45% ~ 55%. Yakadzika yakadzika simba, yakakwira michina zvivakwa. Iyo yekureba tensile simba uye elastic modulus ye unidirectional yakasimbiswa boron aluminium composite ndeye 1.2 ~ 1.7gpa uye 200 ~ 240gpa, zvichiteerana.
Iyo yakareba yakareba yakasarudzika modulus uye yakatarwa simba ingangoita ka3 ~ ka5 uye ka3 ~ 4 nguva dze titanium alloy duralumin uye alloy simbi, zvichiteerana. Yakave ichishandiswa mune turbojet injini fan mashizha, mota yemuchadenga uye setiraiti zvivakwa. Iyo inopisa yekutsikirira diffusion yekubatanidza nzira inoshandiswa kugadzira mahwendefa, ma profiles uye zvikamu zvine maitiro akaomarara, uye inoramba ichikanda nzira inogona zvakare kushandiswa kugadzira akasiyana profiles.
Pashure: Aluminium Boride Upfu, AlB2
Zvadaro: Magnesium Boride Upfu, MgB2
Nesilicon boride upfu Mafekitori
Nesilicon boride upfu Fekitori
Nesilicon boride upfu Mugadziri
Nesilicon boride upfu Vagadziri
Silicon boride upfu Mutengo